Sida loo Connect Android Phone in PC |
Sida loo Connect, shaqeeyaan iyo Control Android Phone on PC
Waxaa sugan, telefoonada Android uu cabsi ku beeray suuqa duufaan iyo sidoo kale revolutionizing warshadaha ee mobile. Tan waxaa sii daayo, tirakoobku wuxuu muujinayaa telefoonada waxaa dhab ahaan ka jeeclaadeen by badan. Waxaa lagama maarmaan ah inaad ogaato sida in ay ku xidhmaan telefoonka aad android in laptop ama PC gaar ahaan ilaa iyo taageero howlan macluumaadka ku saabsan telefoonka. Dhab ahaantii, phone android si fudud ayaa loogu xidhi karaa PC ama laptop inkastoo Wi-Fi ama cable USB.
Part I: Sidee in ay ku xidhmaan phone android in PC la USB
Qaybta II: Xakamaynta Phone Android on PC Isticmaalka Wondershare MobileGo
Qaybta III: Isticmaalka Wondershare MobileGo in Control Android on PC
1. Marka xira phone android in USB, waa muhiim in uncheck debugging USB hore. Taas waxaa la samayn karaa iyadoo la doonayo in 'Settings' ka dibna 'Codsiyada', ka dibna 'Settings Codsiga' ka dibna xulashada 'Development' ka dibna 'debugging USB.'
2. cable USB waa in markaas ku xirnayn in USB Port on laptop ama PC. Astaanta USB icon muuqan doonaa. Tani waxay muujinaysaa in qalabka waxaa si guul leh loo aqoonsaday by PC ama laptop. On screen weyn ee qalabka ee, taabashada 'USB Connected'
Haddii la xidhiidha waa guul, ka dibna qalabka waa in muuqdaan 'Qalabka la saari Kaydinta' ah laptop ama PC.
Wondershare MobileGo waa aalad in nayaa gacanta ku dhow wax walba telefoonka android ka laptop ama PC. Waxay ka dhigaysa mid u fudud in ay u diraan oo dhahaan qoraalka, wareejinta macluumaadka xidhiidh, dib u soo celinta iyo taageero ilaa faylasha, rakibidda iyo uninstalling barnaamijyadooda, helidda xiriirada nuqul, wareejinta sawiro, muusig iyo cajallado fiidyow.
Waxaa xusid mudan in ka hor inta aadan ku istareexaya muuqaalada cajiib ah Wondershare MobileGo, waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo oo ku xidh. Waxaa si fudud ugu shaqeyn karaan marka ay ku xiran via Wi-Fi ama cable USB.
Diritaanka iyo jawaabayay Qoraallada / Message
Iyadoo MobileGo Wondershare, waa fudud si ay u maareeyaan fariimaha ama qoraalka telefoonka aad android ka laptop ama PC. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo diro iyo sidoo kale farriimaha reply isticmaalaya computer bixiyo waxa jira xidhiidh ka guul via USB ama Wi-Fi. Muhiim ku filan, waxaad ka arki kartaa marka fariin u soo diray, oo waxay u cid diray oo sidoo kale waxay leeyihiin fursad ah ee lagu badbaadinayo fariin haddii waxaa muhiim ah in aad.
Soo celinta & Backing Up faylasha
Waxaa jira tiro ka mid ah codsiyada android ku salaysan in la siiyo fursad u ah dib u soo celinta iyo sidoo kale taageero ka kooban files. Si kastaba ha ahaatee, inta badan codsiyada kuwanu ma ku haboon, sababtoo ah waxay tahay mid gaabis ah, gaar ahaan inta lagu jiro hawlgalka iyo keeni luma xiriiro muhiim ah ama data. Oo iyaga qaarkood kalena waa waqti marka dib u soo celinta iyo taageero ilaa files. Dhibaatooyin intaas oo dhammuna waxay si fiican u hadlay Wondershare MobileGo
Kala beddelashada Music
Waa sahlan tahay in lagu daro iyo wareejiyo music la MobileGo Wondershare. Sidoo kale, waxaad dooran kartaa dhowr heeso iyo iyaga isku mar soo dhoofsadaan. Qaabab File sida MP3, FLACS, AACs kaliya in la xuso dhowr ah oo si fudud loo rogi karaa oo ciyaaray qaab aad u jeclaystay. Waxa kale oo jira ikhtiyaarka ah ee xulashada dhowr ah wadooyin cad ka dibna waxayna jiidayeen iyo iyaga tagtey ku gal ah. Sidoo kale, waa ay fududahay in wax laga beddelo sidoo kale la abuuro playlists.
Kala beddelashada ee Photos
Marka uu jiro xiriir ah gooyey iyada oo Wi-Fi ama cable USB, waxaad si fudud u isticmaali kartaa sawirrada si aad si raaxo leh. Iyadoo MobileGo Wondershare, waxaad qabanqaabin kartaa sawiro, aragtida, share oo iyaga si ammaan ah u dhoofiyaan. Sidoo kale, waxaad fursad u haysataa ah ee xulashada dhowr sawiro ama sawiro iyo wadaagto ama u dhoofin.
Kala beddelashada ee Movies
Wondershare MobileGo ka dhigaysa mid u fudud in ay soo bandhigaan macluumaadka xiriirka ee aad telefoon ama dhufto ee kale, tusaale ahaan, Gmail. Waa wax iska fudud in ay soo dhoofsadaan iyo sidoo kale macluumaadka xiriirka dhoofinta, gelinayn xiriirada kooxo kala duwan oo ay ku jiraan la dubayo kor, tirtirto diraya xiriiro. Sidoo kale, waxaad ku dari kartaa oo kale xiriirada.
Kala beddelashada Information Contact
Sida markii hore ku xusan, Wondershare waa qalab u saamaxaya kuwa isticmaala in la xakameeyo qalabka ay android on PC tusaale ahaan, dib u soo celinta, wareejinta iyo taageero ka kooban xijiyaan kala duwan ayaa waxaa jira xiriir aan go'aynin via Wi-Fi ama cable USB.
Ka dib markii ay si guul leh u soo degsado iyo ku rakibidda MobileGo Wondershare, aad waa inuu xaqiijiyaa in US Debugging waa karti. Si tan loo sameeyo, tixraac tallaabada lagu xusay hore.
Ka dib markii ay codsiga aad android, ka dib markii kor booda:
The code QR si toos ah muujin doonaa kombuutarka. Waxaad u baahan tahay lambarka this isticmaalaya app Wondershare MobileGo si xiriir telefoonka dhameystiran la PC.
Tallaabada xigta waa in ay aqbalaan codsiga ee la xidhiidha cusub. Tani waxay kaa caawin doontaa in howlan photos, faylasha, barnaamijyadooda oo kaliya in la xuso dhowr ah.
Si aad dib up, wareejin iyo soo celinta files, filimada, heesaha iwm guji "Back up '. Sidoo kale, waxaad u soo celin kartaa faylasha.
MobileGo Wondershare wuxuu taageeraa kala iibsiga iyo edition of macluumaadka xiriirka. Soo saarida xiriirada nuqul waxaa sidoo kale la fududeeyay.
Iyadoo qalab aad ka jawaabi karaan ama u soo dir qoraalka ama hoos, ama aqbalaan soo socda wac ka laptop ama PC. Xitaa qoraalka group waa karti. Qoraallada si fudud la keeno karo ama dhoofiyo.
Qalab ayaa ku soo beegmay iyadoo feature in sidoo kale loo fududeeyo ururka ee Dalka Chine. Sidoo kale, user ku rakibi karo iyo sidoo kale barnaamijyadooda uninstall. User ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay ikhtiyaar ah oo ah ilaa taageero iyo soo celinta Chine ee jira iyadoo la isticmaalayo Tababaraha MobileGo Wondershare. Waxaa sidoo kale lagu kaydiyo Google play kaas oo u ogolaanaya dadka in ay soo baxdo iyo rakibi barnaamijyadooda kala duwan si ay telefoonka via laptop ama PC.
Waxaa sidoo kale YouTube iyo Wontube MP3 Download. Tani waxay u ogolaaneysaa dadka isticmaala si ay u soo bixi songs, videos, iyo sidoo kale daawato videos.
> Resource > Windows > Sida loo Connect shaqeeyaan iyo Control Android Phone on PC